CATL စက်မှု စီမံကိန်း ရှန်ဟိုင်း Lingang အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး စတင် – Pandaily
CATL စက်မှု စီမံကိန်း ရှန်ဟိုင်း Lingang အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး စတင်
Feb 21, 2022, 17:12ညနေ 2022/02/21 23:36:20 Pandaily
Shanghai Lingang New District တွင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကိုကျင်းပ သည်စနေနေ့ သည် “ CATL (Shanghai) Intelligent Technology Integrated Electric Chassis Development Project” နှင့် “ Ruiting Shanghai Intelligent Power System Project (Phase II)” အပါအဝင် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်း များဖြစ်သည်။
Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ၏အ တို ကောက် ဖြစ်သော CATL သည်တရုတ်နိုင်ငံ ရှိ Tesla ၏အကြီး မား ဆုံး ဘက်ထရီ ပေးသွင်း သူဖြစ်ပြီး ရှန်ဟိုင်း ရှိ စက်ရုံ တစ်ရုံ ကို လည်ပတ် သည်။ CATL စက်ရုံသည် တက် စ လာ သို့တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ မှုများ ပေးနိုင် ဖွယ် ရှိပြီး တက် စ လာ ၏ကြီးမားသော ရှန်ဟိုင်း စက်ရုံ ၏စွမ်းဆောင်ရည် ကိုတိုးမြှင့် နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် CATL နှင့် Shanghai Lingang New District တို့ သည်ယွမ် ၂. ၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၄၂ သန်း) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်ရည်ရွယ် ထားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းကို CATL ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဦးဆောင် အစွန်းရောက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စနစ် နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မီးပြတိုက် စက်ရုံ ဆောက်လုပ်ရေး အတွေ့အကြုံ အားဖြင့်, Lingang အတွက် အစိမ်းရောင် နှင့် အကျိုးရှိ စွာ အသိဉာဏ် စက်ရုံ တည်ဆောက် ပါ လိမ့်မည်, သစ်ကို စွမ်းအင် စက်မှုလုပ်ငန်း layout ကို ပိုကောင်းအောင် နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက် အဓိက နည်းပညာ များ မြှင့်တင် ရန်, မိုင် အကွာအဝေး စိုးရိမ်ပူပန် မှု, အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း အခက်အခဲများ ဖြေရှင်း ပါလိမ့်မယ်။
စီမံကိန်း သည်စုစုပေါင်း 28 ရိယာ ၂ ၈၃, ၇ ၂၁ စတုရန်းမီတာ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး area ရိယာ ၃၅၀, ၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ရှိသည်။ CATL သည် PTO စက်ရုံ တစ်ခု၊ PTO စမ်းသပ် စက်ရုံ တစ်ခု၊ M & P စက်ရုံ နှစ်ခု၊ ကုန်ကြမ်း သိုလှောင်ရုံ သုံး ခု၊ ကုန်ချော ကုန်လှောင် ရုံ နှစ်ခုနှင့် R & D ရုံး အဆောက်အအုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီကြီး CATL ExpEcts သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၂. ၅၉ အထိ အသားတင် အမြတ် ရရှိ သည်ဘီလီယံ
စင်စစ် အားဖြင့် Lingang New Area တွင် စီမံကိန်း ၁၄ ခုသည် မကြာသေးမီက စတင် ဆောက်လုပ် ခဲ့ပြီး စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၊ ဇီဝ ဆေးဝါး နှင့် အရပ်ဘက် လေကြောင်း ကဲ့သို့သော ခေတ်မီ စက်မှုလုပ်ငန်း များအပြင် လူနေ အိမ်၊ စည်ပင်သာယာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဂေဟစနစ် ပတ် ၀ န်းကျင် များပါဝင်သည်။ ဤစီမံကိန်း များ၏ စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ်ရေး area ရိယာ မှာ စတုရန်းမီတာ ၁. ၀၈ သန်း ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မှာယွမ် ၁၈. ၇၄ ၂ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
Tags Battery | Battery Maker | CATL | Shanghai Tesla Gigafactory | tesla
CATL နှင့် EVE သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Tesla ဒီဇိုင်း 4680 ဘက်ထရီ ကိုထုတ်လုပ် မည်
CATL, EVE နှင့် BAK ဘက်ထရီ များအပါအ ၀ င် အဓိက တရုတ် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီများသည် ယခုနှစ်တွင် ဆလင်ဒါ ပုံစံ ၄၆ ၈၀ ကိုစတင် ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
CATL က ပထမဆုံးမိတ်ဆက်တဲ့ ဆိုဒီယမ်အိုင်းရင်းဘက်ထရီကို မောင်းနှင်ပြီး ကားသိုလှောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ လုပ်ငန်းသုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
ကြာသပတေးနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက အွန်လိုင်းသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ တရုတ်ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ ခေတ်ပြိုင်အမ်ပီယာနည်းပညာလီမိတက်(CATL) က တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ ပထမဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒီယမ်အိုင်းရင်းဘက်ထရီနဲ့ ဆိုဒီယမ်အိုင်းရင်းဘက်ထရီနဲ့ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတို့ကို လျှပ်စစ်ကန်ထဲထည့်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Industry Jul 30 ဇူလိုင် 31, 2021
ဘက္ထရီ ဟဲဗီးဝိတ္ထုတ္လုပ္ေသာ CATL အိတ္ထဲသို႔ ေဒၚလာ ၅၈၂ သန္း သီးသန္႔ထည့္မည္
တ႐ုတ္ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္သူ CATL က ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ၃၅ ခုထက္ မပိုေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါက ယြမ္ ၅၈၂ သန္း (၈၉၈၀ သန္း) အထိ ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာသည္။
Industry Aug 13 ဩဂုတ် 13, 2021